Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal चितवनमा कुटिए ज्ञानेन्द्र शाही, टाउँकोमा चोट ! - Pnpkhabar.com
चितवनमा कुटिए ज्ञानेन्द्र शाही, टाउँकोमा चोट !
पिएनपिखबर : ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाही चितवनमा निर्घात कुटिएका छन्। उनको अभियानद्वारा आयोजना हुन् लागेको कार्यक्रमको शरु हुनु अघि नै उनको कुटपिट भएको हो। उनको ठाउँकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण केएमसी अस्पताल लागिएको छ।
उनी सँगै जनमुक्ति सेनाका लेनिन विष्ट र अन्य अभियान्ता समेत् घाइते भएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्वद्ध विद्यार्थीहरु तथा वाईसियलका कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रम विथोल्नुको साथै कुटपिट गरेको बरालको भनाई छ।
उक्त समूहले ज्ञानेन्द्र शाहीको व्यानरलगायतका सामग्री फाल्ने देखि उनी सवार गाडी समेत् तोडफोड गरेका छन्।